Anti-Sanctions Day preparations begin | The Herald
Anti-Sanctions Day preparations begin
22 Sep, 2021 - 00:09 2021-09-22T00:15:07+00:00 2021-09-22T00:01:11+00:00 0 Views
President Mnangagwa will deliver a keynote address that will be broadcast live across all media platforms to mark the SADC Anti-Sanctions Solidarity Day commemorations on the 25th of October.
This year’s anti-sanctions solidarity day commemorations will run under the theme: “Friend to All, Enemy to None: Forging Ahead and Enhancing Innovation and Productivity in Adversity of Sanctions”, in line with the President’s clarion declaration that “Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none”.
Speaking during yesterday’s post-Cabinet media briefing, the Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services Monica Mutsvangwa said that the anti-sanctions drive by SADC as a region over the past two years has rallied more support for the country, even from non-SADC countries.
“While over the years, individual countries had supported Zimbabwe in calling for the removal of the sanctions, the anti-sanctions drive by SADC as a region over the past two years has rallied more support for the country, even from non-SADC countries.
“The negative impact of the sanctions on ordinary Zimbabweans will be highlighted through testimonies from affected businesses and other population groups, including women, the youth and vulnerable groups across all socio-economic sectors,” she said.
Minister Mutsvangwa also outlined that programmes to mark the country’s call against sanctions will be broadcast on all media platforms throughout the month of October, climaxing on 25 October, 2021.
“The activities will also include engagements of the Diaspora, diplomatic corps and SADC missions. Media briefings, interviews and webinars by Zimbabwean Ambassadors in their areas of accreditation will be conducted, while statements on the sanctions situation will be delivered during bilateral and multilateral meetings.
“Buoyed by this solidarity towards Zimbabwe’s cause, Cabinet calls upon all Zimbabweans to play their part in highlighting our plight, given that our friends are in full support of our initiatives towards self-emancipation and attainment of our set Vision 2030. Zimbabwe remains committed to engage and re-engage in its relations with the international community,” said Minister Mutsvangwa.
The Anti-Sanctions Day was adopted by the 39th SADC Summit that was held in Dar es Salaam, Tanzania, in August 2019 and designated the 25th of October of each year as the day of solidarity with Zimbabwe against the illegal sanctions imposed by some western nations.
Two ZNA soldiers perish in Chiredzi road...30 Nov, 2021